Ga na-achọghị ka ọ nwua? | Apg29
Ga na-achọghị ka ọ nwua?
M Kwesịrị ahuhu site ọnwụ ka ekwesighi?
Ugbu a, m dee abụọ m akwụkwọ a kpọrọ "The achọghị". Ọ bụ ihe m bụ nwata, otú m unsolicited bịara n'ụwa a.
Ọ na-e gwara m na m bụ ihe ma ọ bụ na-erughị a mmeko nwoke. Ihe m na-agwa gị na m na-esonụ n'akwụkwọ, na-achọghị. Ẹyenam m dị ka achọghị-ata ya ahụhụ na ọnwụ site na-ete ime?
Ọ bụrụ na m ga-esi ochie ma ọ bụ na-arịa ọrịa, ka m ga-ata ya ahụhụ na ọnwụ dị ka achọghị site "euthanasia"?
Anyị na-ahụ na ma bu n'afọ ụmụaka, ndị ọrịa na ndị agadi na-ebi dị egwu. Ha nwere ike mgbe niile e gburu n'ihi na ha abụghị na-achọsi ike ma ọ bụ ihe bara uru ezuru. Ma eleghị anya, ha nwetara echiche nke a ma ọ bụ onye ọzọ, sị ya.
ụfọdụ ndị enyi na-egosi megide ime na, mgbe ahụ, a onye elu na-asị: "Nke ahụ ị na-adịghị eme ihere!" Kwesịrị ihere jiri ndụ kpọrọ ihe? Olee agbagọ bụghị a kemgbe? Onye ga-eme ihere bụ onye kwuru, sị ya.
My 13 afọ nwa mgbe ụfọdụ nwere miri nchegbu. O kwuru, sị: "Mgbe a mụrụ m, m ọnwa itoolu, ma olee otú o si na ya were otu afọ tupu m na-eme ememe mbụ m ụbọchị ọmụmụ? Ọ ga-dị nnọọ chere ọnwa atọ!"
9 ọnwa + 3 = 1?
Ị nọ na ọnwa itoolu tupu a mụrụ gị. Na ọnwa itoolu, e a ndụ mmadụ gị n'afọ nne na ị. Ga-ndị dị otú ahụ a ndụ aborted na gburu?
M nwere ka ọ dị mfe ná ndụ, kama m na na ezigbo ụtọ a mụrụ m! Na mma niile: M nwetara ohere afọ 20 na-enweta Jesus Christ! Mgbe a mụrụ m na nke ugboro abụọ na m ndụ gbanwee!
Họọrọ nke Chineke
Ọ bụ omume na m achọghị ndị mmadụ, ma, m chọrọ site na Chineke!
Mgbe nwa m nwaanyị mụrụ, ọ aha ya bụ Ọchịchọ. Ọ bụ French maka chọrọ. Ọ nọ na-ma chọrọ site na nwunye m na m - na chọrọ site na Chineke!